भारतमा भोलि चुनाव– प्रधानमन्त्री मोदीको पार्टीले जित्ला ? - Narayanionline.com Narayanionline.com भारतमा भोलि चुनाव– प्रधानमन्त्री मोदीको पार्टीले जित्ला ? - Narayanionline.com
भारतमा भोलि चुनाव– प्रधानमन्त्री मोदीको पार्टीले जित्ला ?
काठमाडाैं– भारतमा लोकसभा निर्वाचनका लागि भोलिदेखि मतदान हुँदैछ । निर्वाचनको परिणामका विषयमा अनेक अड्कलबाजी र चर्चा जारी छ । निर्वाचनमा कसले जित्ला भन्ने तर्कहरुले भारतीय अखबारका पाना रंगिएका छन् । टेलिभिजनमा बिहानदेखि साँझसम्मको चर्चा पनि यही छ । तर चुनाव जित्नेको तस्बिर अझै धमिलै छ्, कसैको पक्षमा सङ्लिएको देखिँदैन ।